Hooyo gabadheeda uga tagtay Warqad dardaaran ah oo ay dad badan la qiiroodeen - BBC News Somali
4 Nofembar 2017
Xigashada Sawirka, HANNAH SUMMERS
Gabadh da'yar ayaa la wadaagtay bulshada warqad qalbiga taabanysa oo ay u qortay hooyadeed ka hor inta aysan dhiman.
Erayada ku qornaa warqadaa ayaa taabtay qalbiyada dad badan oo isticmaala baraha bulshada.
Hooyadan oo lagu magacaabo Peggy Summers ayaa warqadan u qortay gabadheeda oo 18 jir ah iyo walaalaheed ka hor inta aysan u dhiman cudurka Kansarka nooca Kiliyaha ku dhaca gobolka Indiana ee dalak Mareykanka.
Warqada oo ka kooban waano ku aadan dhanka waxbarshada iyo xiriirka ayaa waxaa barta Twitter-ka lagu sii wadaagay in ka badan 90,000 jeer ,iyada oo erayada warqada ay ka gariiriyeen dad badan guud ahaan caalamka.
Warqadan qiirada leh ayaa ku bilaabatay : "Hannah,haddii aad aqrinaysid warqadan markaas qalliinka ma guulaysan,waan ka xumahay waan isku dayay in an ka guulaysto cudurkan balse alle ayaa ii haya wax kale oo aan sameeyo."
Warqadda ayaa ku boorinaysa Hannah in ay iskuulka ku dadaasho iyo in ay wanaajiso xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo aabaheed.
"U Samir aabahaa,taasi waxa ay noqon doontaa mid ku adag isaga waxa uuna u baahnaan doonaan waqti ."ayay ku tiri warqada.
Warqad uu Maxamed Cali u diray Mandela oo la iibiyay
Weligaa ma maqashay warqad jacayl oo sida imtixaanka loo saxay?
Arday Jarmalka u dhashay oo loo xiray Warqad uu BBC u soo qoray
Peggy ayaa sidoo kale gabadheeda u sheegtay: "U sheeg qof waliba in aad jeceshahay.
"Ku raaxiso noolsha,maalin walibana ku xisaabtam sidii in ay tahay maalinkaagii ugu dambeeyay sababtoo ah ma jirto cid inaga mid ah oo og in maanta ay tahay maalinkii ugu dambeysay noolashiisa."ayay tiri Peggy .
Hannah ayaa BBC u sheegtay in aqrinta warqadani ay ahayd mid aad u adag : "waxa aan dhammaanteen aqrinay habeenkii ay hooyo dhimatay ,waxa ayna ahayd mid qiiro leh" ayay tiri.
Kumannaan qof oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ku tilmaamay warqadan ay Peggy uga tagtay gabadheeda mid xikmad ku dheehan tahay.
Saddexdii nin 'ee fuliyay weerarradii safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania'
Dhageyso, DHAGEYSO: "Anagu marna kama qeybgaleyno doorasho aan ahayn wixii lagu heshiiyay"
1 Agoosto 2021
2 Agoosto 2021
"Kuma dhacdid inaad i tiraahdo hadda dumar ma tihid"!
Muxuu Erdogan u doonayaa inuu soo jiito dalalka Islaamka iyo Ruushka?
Dadka caanka ah ee looga quustay inay qubeystaan!
31 Luulyo 2021
"Mareykanku waxaan u ahaa il iyo carrab balse abaalkeyga wuxuu noqday meelaha lagu hayo dadka hooy la'aanta ahi"
Israa'iil iyo Hindiya ma waxay rabeen inay burburiyaan nuclear-ka Pakistan?
30 Luulyo 2021
Maxaa soo celiyay hadal-heynta "quruxlow" Cameron Herrin?
Elba: "Sabrina Dhowre farxad gaar ah ayay i siisay, aad ayaana u jeclahay"
29 Luulyo 2021
Waxyaabo guriga kuu yaalla oo naftaada khatar gelin kara
Itoobiya burbur ma ka badbaadi kartaa?
Wax ka ogow cuntada, jimicsiga iyo jiifka madaxweyne Putin